Kitra – «Ligue des champions d’Afrique 2016» : nandresy ny Wydad fa tsy tafakatra ny Cnaps Sport | NewsMada
Kitra – «Ligue des champions d’Afrique 2016» : nandresy ny Wydad fa tsy tafakatra ny Cnaps Sport
Nahavita ny valin’adiny ny Cnaps Sport, teo amin’ny lalao miverina amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, rehefa nandresy ny Wydad, avy any Maraoka. Fandresena mijanona ho voninahitra fotsiny fa tsy nahafahana nanohy ny lalana.
Resin’ny Cnaps Sport, tamin’ny isa 2 noho 1, ny Wydad Athletic Club avy any Maraoka, teo amin’ny lalao ampaha-16-n-dalana, miverina amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika “Ligue des champions”, taranja baolina kitra. Fihaonana, notanterahina tany amin’ny kianja Rabemananjara, ny asabotsy lasa teo.
Tsy ampy niakaran’ny ekipa Malagasy anefa io fandresena io satria efa nanantombo tamin’ny isa 5 noho 1 ny Maraokanina, nandritra ny lalao mandroso, tany Casablanca, herinandro lasa izay. Afa-bela aloha izany ny ekipa malagasy satria tsy resy teto amin’ny taniny.
Raha hiverenana kosa ny fihaonana, efa saika nahavita ny fanambiny ny Cnaps Sport, satria nitarika tamin’ny isa 2 noho 0, teo amin’ny fizaram-potoana voalohany. Baolina voalohany tafiditr’i Njiva, teo amin’ny minitra faha-26, rehefa voafitany i Fall, ary namono ny baolina tamin’ny alalan’ny daka mandrivorivo.
Velombolo tanteraka teo ny ekipan’ny Cnaps Sport sy ireo mpijery tonga marobe. Tsy nahazaka ny hafanana ihany koa ny Maraokanina ka niandry nosarahina fotsiny sisa. Nisesy ny fanafihana malagasy. Nanampy ny isa indray ny ekipa tompondakan’i Madagasikara, teo amin’ny minitra faha-44, rehefa voafingana tao anaty faritra tsy azo ivalozana i Rinjala, ka nahazoana “penalty”. Matin’i Feno izany rehefa nodakany. Nitarika tamin’ny isa 2 noho 0 ny Cnaps Sport, teo, izay nentina niala sasatra ihany koa.
Niezaka nitady isa 2 indray ny Cnaps Sport, teo amin’ny fizaram-potoana faharoa. Nanao izay ho afany ry Nônô sy Njiva, saingy tsy nety nikobana intsony ny mason’haraton’ny Wydad. Nanolo mpilalao Rahery Be, izay nanamafy ny lohalaharana, tamin’ny alalan’ny Niasex, fa tsy nety maty ny baolina. Totoafo ny fanafihana fa ny famaranana no tsy tao satria maika loatra ireo lohalaharana. Na diso mafy na mora loatra ny tolotra nifanaovan-dry zalahy. Nikoropaka loatra nitady ny baolina fahatelo ka nanjary nanaotao foana. Anisan’izany ny dakan’i Njiva izay nisavoana be, teo amin’ny minitra faha-84.
Rehefa nanafika tsy namono ny Cnaps Sport, nanjary fahombiazana ho an’ny Wydad indray izany. Nahatafiditra ny baolina tokana ho azy ny Maraokanina, teo amin’ny minitra faha-90, tamin’ny alalan’ny valim-panafihana, izay tsy nisy nampoizin’ireo vodilaharana malagasy mihitsy.
“Tafita ny hafatra, tamin’ny fizaram-potoana voalohany saingy nitaky ny havizanana, teo amin’ny tapa-potoana faharoa, noho ilay elanelan-dalao herinandro. Hany ka elaela indray vao tafiditra tao anaty lalao, ry zalahy”, hoy Rahery Be, mpanazatra.